Haweeney Soomaaliyeed oo lagu cunsuriyeeyay Tomelilla | Somaliska
Haweeney Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Malyuun ayaa lagu cunsuriyeey kamuunka Tomelilla oo u dhow magaalada Malmö ayadoo ay dhalinyaro ku nool halkaas dhagaxaan ku tuureen oo hadalo aflagaado ah u geysteen. Malyuun ayaa ogeysiisay iskuulka ay dhiganeysay ayagoo booliska uga dacwootey arintaas balse booliska ayaan waxba ka qaban cabashadeeda. Ardada iskuulada ayaa jidka u istaagay Malyuun oo ku yiri hadalo aflagaado ah sida "nigro" iyo ayagoo wax ka sheegay xijaabkeeda. Dhibaatadaan ayaa Malyuun ku haysatay Tomelilla xili ayadoo waqtigii qaboobaha ay ilmaha ku tuurayeen dhagaxaan baraf ah iyada iyo gabadheeda. Hadaba dhibaatada ku dhacday Malyuun ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay wargeyska Sydsvenskan oo mowduuc aad u dheer ka qoray. Mowduucaas ayaa gaaray dhamaan dadka ku nool magaalada Tomelilla iyo gobolka Skåne ayadoo maamulka kamuunka ay hada go'aansadeen in ay sameeyaan gudi ka hortaga cunsuriyada. Cunsuriyada iyo neceybka loo qabo Muslimiinta ayaa siyaadey ka dib markii ay baarlamaanka soo galeen xisbiga cunsuriga ee SD ayadoo weeraro fara badan lagu qaaday dadka muslimiinta ah oo ay ku jiraan Soomaalida sanadkii la soo dhaafay. Sidoo kale waxaa xaalada sii kiciyay ka dib markii nin isku qarxiyay magaalada Stockholm bishii December. Waxaa muhiim ah in qofkii lagu sameeyo ficilo xumaan ah ama la aflagaadeeyo in uu war galiyo cida ay quseyso oo ay la xiiraan booliska.
Haweeney Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Malyuun ayaa lagu cunsuriyeey kamuunka Tomelilla oo u dhow magaalada Malmö ayadoo ay dhalinyaro ku nool halkaas dhagaxaan ku tuureen oo hadalo aflagaado ah u geysteen. Malyuun ayaa ogeysiisay iskuulka ay dhiganeysay ayagoo booliska uga dacwootey arintaas balse booliska ayaan waxba ka qaban cabashadeeda.
Ardada iskuulada ayaa jidka u istaagay Malyuun oo ku yiri hadalo aflagaado ah sida “nigro” iyo ayagoo wax ka sheegay xijaabkeeda. Dhibaatadaan ayaa Malyuun ku haysatay Tomelilla xili ayadoo waqtigii qaboobaha ay ilmaha ku tuurayeen dhagaxaan baraf ah iyada iyo gabadheeda.
Hadaba dhibaatada ku dhacday Malyuun ayaa waxaa baaritaan ku sameeyay wargeyska Sydsvenskan oo mowduuc aad u dheer ka qoray. Mowduucaas ayaa gaaray dhamaan dadka ku nool magaalada Tomelilla iyo gobolka Skåne ayadoo maamulka kamuunka ay hada go’aansadeen in ay sameeyaan gudi ka hortaga cunsuriyada.
Cunsuriyada iyo neceybka loo qabo Muslimiinta ayaa siyaadey ka dib markii ay baarlamaanka soo galeen xisbiga cunsuriga ee SD ayadoo weeraro fara badan lagu qaaday dadka muslimiinta ah oo ay ku jiraan Soomaalida sanadkii la soo dhaafay. Sidoo kale waxaa xaalada sii kiciyay ka dib markii nin isku qarxiyay magaalada Stockholm bishii December.
Waxaa muhiim ah in qofkii lagu sameeyo ficilo xumaan ah ama la aflagaadeeyo in uu war galiyo cida ay quseyso oo ay la xiiraan booliska.
SJ oo soo bandhigtay tareeno cusub
Tima-jarayaasha Sweden oo aan aqoonin sida loo jaro timaha Afrikaanka
Malyuun Waan Ka xumahay arinta kugu dhacday balse waxaad ogaataan soomaaliyay War badan looma baahne cunsuriyada shacabkooda kaliya Ma ahan ee police Ka xitaa waa cunsuri intooda badan ee iska ilaa liya arintaasna guud ahaan wadankan way Ka wada jirta
mahadsanidiinn wargayska wararka ee somaliska balse waxaa ad iyo aad u ficnaan laheeyd in somali oo dhan oo isku xirnaadan maxaa yelay manta wax yabahaan oo kale hadii ay halmar dhacaan markale ma sii dhaci la heen mida kale waxaan malyuun kula talinaya in aysan ka harin dadkii ayna ku dacweeyso policeka ita ay awooda hadii kale waxaa ku iman karo wax kale ee aan la ogeeyn qof kii garanayo malyuun ha cawiyo hadii mesha somali aysan jogin na dagmada ha ka codsato in ay cabsanayso aysan ku noolan karin baladkaas ayna ka codsato meel ay nabad galyo ku heli karto iyada iyo diinteeda maxaa yeelay malyuun wadankeeda somaliya waxa ay oga so carrartay nabad galyo xumi balse sweden waxa ay u timaaday in ay nabad ku noolaato si ay u hesho nabad ka fican wadankeeda lakin manta malyuun oo sweden jogto ayaa naffteeda ula cabsanayso sidii in ay jogto somalia oo dagalo ka jiraan arintaas na wa wax u bahan wax ka badalid rasmi ah eeeeeeeee sweden amnigooda
ali vilhelmina says:
waan ka xumahay waxa ku dhacay walaashey waana wax laga xumaado ilaahey hanaga mootiyo wixi xun oo dhan